Zimkhalele owesifazane obanjwe nezidakamizwa | News24
Zimkhalele owesifazane obanjwe nezidakamizwa
Johannesburg - Amaphoyisa aseLimpopo abophe owesifazane oneminyaka engu-46 ubudala ngecala lokushushumbisa izidakamizwa.
Amaphoyisa alandele umkhondo ngowesifazane obebuyela eGoli ephethe izidakamizwa.
Okhulumela amaphoyisa uColonel Moatshe Ngoepe uthe owesifazane utholakale namaphakethe angu-1 025 ewunga angabiza u-R51 250 ngentengo yasemgwaqeni.
OLUNYE UDABA: Umunyu exolisa emindenini kolwase-Life Esidimeni
UNgoepe uthe ngesikhathi amaphoyisa esaqhuba lo mkhankaso, aphinde abopha abantu abangu-15 abaneminyaka ephakathi kuka-20 no-47 ubudala ngokushushimbisa izidakamizwa, ukutshala isangu, ukutholakala nensangu, ashaqa amaphakethe angu-249 ensangu.
Uthe amaphoyisa aphinde ashaqa izimoto ebezisetshenziselwa ubugebengu, okubalwa kuzona neyohlobo lweMercedes-Benz kanye namaplastiki amathathu abequkethe izidakamizwa ze- meth ezingabiza u-R200 000 ngentengo yasemgwaqeni.